ဆောင်းလူ – စားကောင်းရုံလုပ်ကြတဲ့ လောကကြီး (၂) | MoeMaKa Burmese News & Media
ထွဋ်ခေါင်ဖြိုး - ငပွေတိုအလွမ်း
ပြည်သစ်ဟန် ● လူကို ဘယ်လိုမြင်ကြမလဲ
နိုလိုင်း ● အပျော်ကြွေတဲ့ ကြယ်
(မိုးမခ) မတ် ၂၁၊ ၂၀၁၆
ခုတော့ဗျာ … အသက်ကလည်း ကြီးလာ … အရင် ဟိုးငယ်တုန်းကလို အရာရာက သန်တုန်း မာတုန်း မဟုတ်လေတော့ တချို့ဟာတွေက ပေါင်းစားလာရတယ်ဗျာ ..။ ပေါင်းစားမှလည်း နူးပြီး အိနေတာကိုးဗျ ..။ ပေါင်းစားဆို သွားတွေကလည်း ခပ်နဲ့နဲ့ဖြစ်လာပြီလေ .. …။ အသက်ကြီးလေ ပေါင်းစားသင့်လေပဲဗျ ..။
ဘယ်လို ဘယ်နည်းနဲ့ပဲ ပေါင်းပေါင်း …
ပေါင်းစားရင် ကျုပ်က အကုန်ကြိုက်တာချည်းပဲ …။
ကျုပ်လား … ဘယ်နေမလဲ … ပေါင်းစားပါတယ်ဗျာ ..။
ကျုပ်လို ဟိုမတတ် ဒီမတတ်၊ အတန်းပညာ ကမျောက်ကခြောက်က ပေါင်းစား၊ မြှောက်စား၊ ခြောက်စားတာ အကောင်းဆုံး ပဲလေ …။ ခင်ဗျား မေးမှ လမ်းကြောင်းတွေ ချော်ကုန်ပါပြီ။ ကျုပ်က နူးအိနေအောင် ပေါင်းစားတာကို ပြောနေတာ …။
ပေါင်းစားတာလွယ်ပါတယ်ဗျာ … ပေါင်းတတ်ဖို့ပဲ လိုတာ …။
ကိုယ့်အကြိုက်ပေါ့ … ဟဲ ဟဲ …
ဖြစ်နိုင်ရင်ဗျာ ခေါင်းပေါင်းတောင် နူးနူးအိအိလေးဖြစ်အောင် ပေါင်းစားချင်တာ .. ဟဲ ဟဲ ဟဲ …။ ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ဗျာ … ၀ါးရ သက်သာ … နင်တာ သက်သာတာပေါ့ ….။ ရှလွတ် ရှလွတ်နဲ့ဆိုတော့ … အ၀င်ကောင်းတော့ … များများစားစား ပိုမျိုနိုင်တာ ပေါ့ဗျာ …။
ကျုပ်ရုပ်တောင် ပေါင်းစားရုပ်ပေါက်နေတာ ….
ပွစိ ပွစိနဲ့ …။
တခါတလေ အမျိုမတတ်တော့လည်း … ကံဇာတာအလိုအရ နင်တာပေါ့ဗျာ …။ ဘယ်တတ်နိုင်မလဲ … ကိုယ်မှ အမျိုမတတ် တာ …။
ဒါ့ကြောင့် ပြောတယ် ….
ပေါင်း စား ကြ ပါ
ပေါင်း စား ကြ ပါ လို့ …။
အဓိက … ပေါင်းတတ်ဖို့ပဲ လိုတာပါဗျာ …။